Hividy na tsia hividy iPad vaovao? Manampy anao izahay manapa-kevitra | Vaovao IPhone
Ny iPad vaovao dia efa eo amintsika ary mpandimby mendrika ny iPad 2, na izany aza, mety ho tapa-kevitra ianao ary tsy hahafantatra raha ny tsara indrindra entin'ny fitaovana vaovao dia hitondra anao zavatra tena manararaotra amin'ny fampiasanao mahazatra.
Mampiharihary anao izahay eto ohatra sasantsasany amin'ny antony na maninona tsy mila mividy iPad vaovao ianao.
1 Vidio ny iPad vaovao raha tianao ny lalao:
2 Vidio ny iPad vaovao raha olona multimedia ianao:
3 Vidio ny iPad vaovao raha mpampiasa iPad 1G ianao:
4 Vidio ny iPad vaovao raha mieritreritra ny hividy takelaka ianao:
5 Aza mividy iPad vaovao raha manana iPad 2 ianao:
Vidio ny iPad vaovao raha tianao ny lalao:
Ny lalao no fampiharana avo lenta izay mamoaka ny GPU amin'ny iPad vaovao. Betsaka ny ohatra ao amin'ny App Store, na dia ampy aza ny milaza ny Infinity Blade, Shadowgun na Real Racing 2 hahafantarana izay lazaiko.
Mampalahelo fa tsy mandray sary an-tsaina ny zava-misy amin'ny iPad ny mpamorona raha tsy mivoaka ny iPhone manaraka. Raha mijery ny iPad 2 ianao, dia very maina ny GPU mandra-pahatongan'ny famoahana ny iPhone 4S, izany hoe 6 volana niandrasana hanomboka hijery lalao izay tena manararaotra ny hery ananan'ilay takelaka.
Ao amin'ny tambajotra dia misy ny tsaho milaza fa tsy afaka nampiditra ny A5X ho an'ny taranaka manaraka amin'ny iPhone i Apple, izay mahatonga ity mpandray anjara voalohany an'ny iPad vaovao ity ho ratsy kokoa. Ny A5X dia manolotra herin'ny sary tsy misy indrafo ary mampitombo ny fanjifana, noho izany Apple dia tsy maintsy nampitombo ny hatevin'ny iPad vaovao mba hampiditra batterie capacité lehibe kokoa.
Alao an-tsaina ny puce iray misy ny herin'ny A5X ao amin'ny iPhone. Ny bateria dia haharitra minitra vitsivitsy amin'ny fahafahany feno. Raha manana iPhone 4S ianao dia milalao mandritra ny fotoana maharitra ny Infinity Blade 2 dia ho hitanao izany, ankoatry ny fanafanana dia nihena be ny isan-jaton'ny bateria.
Manantena aho fa ny mpandraharaha dia ampirisihina sy hanatsara ny lalao misy azy ireo, tsy vitan'ny hoe avo roa heny ny haben'ny firafitra fa koa mampihatra effets vaovao izay manamarika izany fahasamihafana eo amin'ny fahombiazan'ny iPad 2.
Vidio ny iPad vaovao raha olona multimedia ianao:
Mandany ny tontolo andro ianao mijery andian-dahatsoratra, sarimihetsika, sary, tranofiara ... amin'ity tranga ity, mividiana iPad vaovao eny na eny. Ny efijery retina dia fialan-tsiny ampy tsy hanohizany miady hevitra momba an'ity raharaha ity.
Amin'ity tranga ity, ireo olona rehetra mankafy mijery karazana atiny samihafa dia tafiditra ao koa: tonian-dahatsoratra, mpamaky, mpaka sary ...
Vidio ny iPad vaovao raha mpampiasa iPad 1G ianao:
Ny iPad voalohany dia nanjary lany andro tamin'ny fahatongavan'i iOS 4. Ny 256 MB RAM misy azy dia enta-mavesatra ahafahana mihazakazaka fampiharana marobe izay mivoaka ao amin'ny App Store.
Amin'ity tranga ity, raha manana iPad 1G ianao ary tsy misy fitaovana mpifaninana miantso anao, fotoana izao hanaovana ny dingana amin'ny iPad vaovao. Ilay anananao izao dia azonao omena azy ary tsara tarehy, na dia azonao amidy aza izy io mba hampidina ny vidin'ny fividianana ny "whim" vaovao.
Vidio ny iPad vaovao raha mieritreritra ny hividy takelaka ianao:
Sarotra be ny miady hevitra momba ny antony iPad fa tsy ny fitaovana mifaninana fotsiny. Haveriko fotsiny izay lazain'i Apple imbetsaka: "mandeha fotsiny izany."
Na dia misy takelaka maivana sy maivana kokoa aza, ny fizakantenan'ny iPad, ny heriny, ny azo atao noho ny App Store, ny fanohanan'ireo mpanamboatra fitaovana ... Ny iPad amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy amin'ny fatokisan-tena be loatra izay misy.
Aza mividy iPad vaovao raha manana iPad 2 ianao:
Ity no tranga sarotra indrindra. Ny iPad 2 dia mbola takelaka iray amin'ny haavon'ny maha-tsara indrindra azy ary raha efa manana izany ianao dia afaka manao ilay fitsangatsanganana ifanaovana ihany raha:
Mahagaga ianao ary maniry ny farany hatrany (jereo ny tranga misy ahy ...).
Hivarotra ny iPad 2 ankehitriny ianao amin'ny vidiny lafo mamela anao hahazo ny iPad vaovao amin'ny vola kely dia kely.
Raha ny iPad 2 no ampiasainao hivezivezy amin'ny Internet, jereo ny mailaka sy ny asa tsotra hafa, tsy mendrika izany ny fanovana. Aleo miandry ny iPad Vaovao Vaovao (iPad 4G) ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Hividy na tsia hividy iPad vaovao? Manampy anao izahay amin'ny fanapaha-kevitra
Tutorial: jailbreak nikatona tao amin'ny iOS 5.1 miaraka amin'ny Redsn0w (Mac sy windows)